San francisco 49ers smokescreen oge na jimmy garoppolo
San Francisco 49ers nwere ike na-achọ ịchọta ụzọ ha ga-esi na azụmahịa Jimmy Garoppolo. ... (Foto nke Adam Glanzman / Images)
Ihe mgbochi nke 49ers nke San Francisco nwetaghachiri aka dị elu na 2021 NFL gbara site na No.12 gaa na nke atọ na-ebu ụzọ zigara ụwa bọl.
Ọ bụ ugbu a karịa doro anya na San Francisco nọ na-achọgharị ihe ga-eme n'ọdịnihu mgbe ọ hapụsịrị ụzọ atọ mbụ na otu ụzọ atọ iji sonye na Miami Dolphins. Ma ọ bụ Justin Fields, Trey Lance ma ọ bụ Mac Jones na nhọrọ nke atọ, ọ na-ewelitekwa ajụjụ ndị gbara ọkpụrụkpụ gbasara ọdịnihu Jimmy Garoppolo na ndị 49ers
Onye isi nchịkwa Kyle Shanahan na onye isi njikwa John Lynch kwuru banyere ya n'oge mkparịta ụka mgbasa ozi na post na mgbasa ozi na mbido izu ahụ. Nausoro, ha mere ihe niile iji kwado Garoppolo.
"Jimmy enweghị obi anụrị banyere nke a, mana ọ mere nke ọma dịka ọ na-eme mgbe niile," ka Shanahan kwuru. "Anyị na-eme atụmatụ mgbe niile ịnya anyị ma na-eme ihe niile anyị nwere ike ime na ya. nwee ọ happyụ ma ọ bụrụ na onye were gị n'ọrụ kpọta onye na-eto eto, onye nwere ọgụgụ isi ka ọ zụọ azụ gị mgbe ị na-akwụ ụgwọ iji were onye ahụ n'ọrụ? Echeghị m nke ahụ. O doro anya na Shanahan na Garoppolo kwurịtara okwu ozugbo ahịa azụmaahịa gara nke ọma. Lynch gwara onye ọgba bọọlụ ahụ nsogbu nọ na ụbọchị ahụ. , San Francisco 49ers na isi nke nloghachi
Site na Vincent Frank
Nke a dị mkpa dị ka akụkụ nke mkparịta ụka lebara anya na San Francisco obi ụtọ banyere ụlọ ọrụ nweere onwe ya na echiche nke ịmaliteghachi ya na Garoppolo maka oge 2021. "Ozi a bụ ihe anyị na-eme, ihe kpatara anyị ji eme ya na otu o si bụrụ akụkụ nke atụmatụ anyị," Lynch gwara ndị nta akụkọ. "Echere m na mkparịta ụka ndị a kwesịrị ka nzuzo, ma Jimmy, ọ nabatara asọmpi ahụ. Ọ ka ga-ahụ ma ebumnuche a niile iji kwado Garoppolo n'otu n'otu ma ọ bụ na ahịa nwere ike. Mana enwere ọtụtụ ihe ebe a. Nkwekọrịta Jimmy Garoppolo bụ akụkọ bụ isi
Azụmahịa Jimmy Garoppolo ka nwere ike ime. (Foto nke Ezra Shaw / Images) Images
ingbanye nke afọ ise nke $ 137.5 nde na February 2018, Garoppolo, 29, kwesịrị gụọbụ $ 26.4 nde megide Cape na-esote oge. Ugbu a, nke ahụ ga-abụ nke isii kachasị elu n'etiti NFL quarterbacks.
Aaron Rodgers: $ 37.2 nde
Russell Wilson: $ 32.0 nde
Kirk Cousins: 31, $ 0 nde
Ryan Tannehill: $ 29.5 nde
Matt Ryan: $ 26.9 nde
Ọ dịghị onye nwere ebumnobi chere na Garoppolo bara uru ụdị a okpu kụrụ. N'agbanyeghị nke a, ndị otu nweere 49ers kwetara ịkwụ ya ego na 2021 ka ha na-ewepụta ọrụ dị egwu nke ọma.
San Francisco 49ers ụgwọ ọnwa okpu
Lynch na Co. banyere n'ụlọnga n'efu na-enweghị nnukwu ego iji nọrọ n'okpuru okpu ụgwọ 2021 NFL. ime na ọdịda nke ego nke ọrịa COVID-19 na-efe efe.
Ekele maka nka onye isi nke otu Paraag MaratheSite na ntinye, San Francisco nwere ike idowe ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị ọrụ nnwere onwe ya lekwasịrị anya ma na-agbakwunye omimi na ndepụta. Ọ bụghị obere ọrụ.
ỌZỌ SITE Hfrance.fr
San Francisco 49ers na-eme nnukwu ihe ọzọ, na-edegharị ọzọ K 'Waun Williams
n’oge niile, San Francisco emefuola ego maka okpu Garoppolo nke $ 26.4 nde kụrụ. Anyị amatala ihe kpatara ya. Nhazigharị nkwekọrịta kwuru mgbe ọ na-agbadata ọnụ ọgụgụ 2021 max ga-ekekọta ihe ndị ahụ na 49ers ahụ karịa oge ọzọ, ma ọ dịkarịa ala site n'echiche ego. Ugbu a, ndị 49ers nwere ike ịhapụ ma ọ bụ zụọ Garoppolo naanị $ 2.8. Ọ bụrụ na ha mere njem a mgbe oge 2021 gasịrị, Lynch na Co. ga-echekwa $ 25.6 nde karịa okpu 2022. Nhazigharị ọ bụla agbanweela nke ahụ n'ụzọ mdị mkpa. 49ers nwere ike ịchọ uru na Jimmy Garoppolo Trade Ka anyị leba anya na optics n'oge Alabama's Pro Day n'izu a. San Francisco Brass nọ na Tuscaloosa iji kirie ihe omume ọhụụ ọhụụ Mac Jones na-eme. A pụkwara ikwu otu ihe ahụ banyere onye isi nchịkwa New England Patriots na onye na-eme mkpebi Bill Belichick.
Ya mere, ọ bụ ihe na-adọrọ mmasị na Lynch, Shanahan, na Belichick hụrụ na Professionalbọchị Ọkachamara na-akparịta ụka.
Odi uzo doro anya n’ebe a. New England nwere mmasị ịghaghachi Garoppolo mgbe ha rere ya San Francisco n'etiti oge 2017 bụ
ugbu a maara nke ọma
Ha nwere ike ikwurịta ihu igwe na Alabama. Ikekwe Belichick chọrọ n'ezie ịma ka kọfị Lynch dị ụtọ. Ọ dị mma, nke ahụ abụghị ihe ọchị mgbe a bịara n'ịkọ nkọ n'oge NFL oge nzuzu.
Ọbụna mgbe ahụ, ndị 49ers ahụ na onye ọrụ Miami Dolphins na-azụ ahịa na BYU Pro Day, ebe Zach Wilson na-azụ ọzụzụ na Utah. A na-eduzi azụmahịa na mmemme ndị a na-eme kwa afọ. Ọ bụghị naanị ile anya n’olileanya.
Site na ịkwado Garoppolo ma na-ekwu okwu banyere ya dị ka ha nwere ike ịbụ Week 1 Starter, ndị 49ers na-ezipụ ozi doro anya na New England. Azụ ahịa agaghị eme ọnụ ala. Shanahan mere ka o doo anya na nkwupụta ya banyere njikere San Francisco ị toa ntị na onyinye ahụ. "Ee nke ahụ ziri ezi na ndị egwuregwu niile nọ n'òtù anyị. Echere m, pro bably tinyere mụ onwe m," Shanahan kwuru mgbe a jụrụ ya ma ndị 49ers ahụ ga-atụle azụmahịa Jimmy Garoppolo. "Ọ bụrụ na mmadụ kwere anyị nkwa maka mụ, ana m eche na John ga-ere m ahịa. Echere m, n'ezie. "
Omume nke akụkọ a? San Francisco karịrị ihe ị ga-abanye n'ime ya. izu 1 naonye na-akpọghị aha na-akwado Garoppolo. Ma nke ahụ ga-eme ka a mara.
Ihe ize ndụ nke ahia Jimmy Garoppolo
The 49ers Hà ga-enwe ntụsara ahụ na ubi Justin dị ka izu nke mbido izu 1? (Foto nke Jamie ...
Shanahan mere ka o doo anya n'oge post-ahia rush na ọ gaghị enwe ahụ iru ala ịbanye na oge ahụ na rookie na-amalite maka 49ers. O kwenyesiri ike na San Francisco na-anọgide na esemokwu Super Bowl n'agbanyeghị mmeri egwuregwu isii nke oge gara aga nke mmerụ ahụ gosipụtara.
"Anyị nọ n'ọnọdụ ebe ị na-eweta rookie quarterback, maka m ọ ka mma mgbe niile, ọkachasị na squad ị nwere, ọ bụrụ na ị nwere onye agha nke malitere ugbua. onye ị hụrụ n'anya na onye obi ruru gị ala na mmeri, ”onye isi nchịkwa gwara ndị nta akụkọ. "Ọ bụ n'ozuzu ntụziaka nakedu nke ịchọrọ ịga ma atụba onye ọzọ n'ime ọkụ ruo mgbe ha dị nnọọ njikere. Nke a bụ ọnọdụ anyị hụrụ onwe anyị na ya.
N'adịghị ka akụkọ ahụ malitere (
) n'oge ụlọ ọrụ na-akwụghị ụgwọ, ndị 49ers anaghị elele ọnọdụ ndapụta maka Garoppolo. Kama nke ahụ, ha na-ezubere nhọrọ ndị nwere ike ịmalite iji malite tupu oge ezumike. Nhọrọ ndị ọzọ bara uru iji doo anya.
Nke a gụnyere Andy Dalton, Mitchell Trubisky na Ryan Fitzpatrick. Mmasị San Francisco nwere na Deshaun Watson tupu ihe mgbawa mmegide mmekọahụ
n'agbanyeghị, nke ahụ bụ ihe otu ahụ na-eme n'azụ ihe nkiri ahụ.
Egwu ahia ahia Garoppolo ebuwanye ibu. Ọ bụ ezie na Shanahan kwenyesiri ike na onye ọkpọkọ azụ azụ agaghị enwe ike iduga ndị 49ers na ọgụ Super Bowl, nhọrọ ndị ọzọ na-akwụ ụgwọ na nnwere onwe na quarterback anaghị adaba na azụmaahịa.ec Garoppolo. Alex Smith na Robert Griffin III? Ee, ọ bụghị.
O nwere ike ịbụ na San Francisco na-eleba anya n'ahịa azụmahịa. Ya na onye isi ndu Jags bu onye isi Urban Meyer, onye achoro ka o hoputa ihe Clemson bu Trevor Lawrence No.1 na ngwucha nke onwa Eprel.
ihe ndị ọzọ Hfrance.fr 5 wepụaways site ịga nke ọma San Francisco 49ers mgbanwe oru ngo na Miami Dolphins Site Vincent Frank Minshew, 24, na-atụ anya inwe ihe na-erughị $ 2 nde megide okpu ahụ n'ime afọ abụọ na-esote. Ọ nwere ihe ịga nke ọma n'oge gara aga ma enwere ike ịhọrọ ya maka iburu ya. Las Vegas Raiders quarterback Marcus Mariota ghọrọ nhọrọ ọzọ mgbe emezigharị nkwekọrịta ya. Nhazigharị a nwere nkebi ahịrị ahia. Mana ọ naghị achọ ọgụgụ isi ịghọta na ọ na-eme ọzọga-agbaghara nkebi ahịrịokwu ma ọ bụrụ na nke ahụ pụtara ịbụ onye mbido na 2021 kama ịkwado Derek Carr.
Ndị a bụ naanị nhọrọ abụọ ezi uche dị na 49ers nwere ma ọ bụrụ na ha ahọrọ ịzụ Jimmy Garoppolo. N'ụzọ doro anya, ọ dabere na Shanahan na Lynch enweghị ntụsara ahụ na-amalite izu Izu 1. bụ nnukwu wepụ. O doro anya na ndị 49ers ga-anwụ Anyị nwere obi ụtọ ịbanye Izu 1 na Garoppolo dị ka onye na-amalite na onye nwere nkà rookie na-amụta n'azụ ya maka oge.
Heck, enwere ohere Garoppolo ga-alaghachi n'ụdị 2019 ma duga San Francisco na playoffs. Nke a ga - eme ka uru azụmaahịa nke quarterback ka ọ dịkwuo mma n'oge na-abịanụ, nke a abụghị obere ihe nyere 49ers enweghị mpempe akwụkwọ na-esochi izu ụka gara aga.e.
Nke ahụ ga-abụ ezigbo ọnọdụ. Mgbe anyị kwusịrị nke ahụ, e nwere n'ezie ihe ndị ọzọ a ga-atụle.
Nọmba nọmba Garoppolo 2021 na-eme dị ka aka.
Ndị Patriots nwere mmasị na ya
nwere ike ịhụ San Francisco na-enweta ezigbo nloghachi maka akwụkwọ afọ a. Site na nke a, m na-ekwu ka etiti na-agbanwe ma gbanwee. N’aka nke ya, Garoppolo enweghị afọ ojuju na azụmaahịa na-aga nke ọma. Nke ahụ nwekwara ikere oke na usoro mkpebi 49ers.
Ugbu a ihe niile bụ igwe anwụrụ. Anyị enweghị echiche ọ bụla ihe ndị 49ers na-eche. Ogo nke ujo na enweghị mwụda n'ime nzukọ San Francisco na-eduga na azụmaahịa na-aga nke ọma na Miami na-agbakwunye ntụkwasị obi karịa nke a.
Kọleji NCAA na mahadum kwesịrị ịkpa àgwà ka ndị otu na ndị na-adịghị ka ndị na-eketa oke
2021-04-18 16:03:31 | EgwuregwuMoney
Institutionslọ ọrụ NCAA gosipụtara na ha nọgidere na-esonye na NCAA n'ihi na a na-ahụta ya dị ka mkpakọrịta dị ùgwù karịa, na-akwụ ụgwọ maka njem oge ọ bụla, na-enye iwu na ụkpụrụ, yana n'ihe banyere ụfọdụ mmemme nke Division I, na-enye ụbọchị ịkwụ ụgwọ dị arọ. ...